आइपिएल २०२० : ओरेन्ज क्यापका पाँच दाबेदार | Hamro Khelkud
आइपिएल २०२० : ओरेन्ज क्यापका पाँच दाबेदार
एजेन्सी – इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल) को १३ औं संस्करण सेप्टेम्बर १९ देखि संयुक्त अरव इमिरेट्स (यूएई) मा सुरु हुँदैछ । नोभेम्बर १० सम्म चल्ने प्रतियोगिताका लागि सबै टोली यूएई पुगि सकेका छन् ।
आइपिएल २०२० को लागि सबैले आ– आफ्नो मजबुत टोली बनाइसकेका छन् । आइपिएलमा सर्वाधिक रन बनाउने खेलाडीले ओरेन्ज क्याप पाउने गर्दछन् । आइपिएलका १२ संस्करण सकिँदा तीन पटक मात्र भारतीय खेलाडीले ओरेन्ज क्याप जितेका छन् । अन्य सबै विदेशी खेलाडीको बाहुल्यता छ ।
अष्ट्रेलिया ओपनर तथा सनराइजर्स हैदराबादका कप्तान डेभिड वार्नर तीन संस्करण सम्म सर्वाधिक रनका साथ ओरेन्ज क्याप जितेका छन् । रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोरबाट क्रिस गेलले २०११ र २०१२ मा ओरेन्ज क्याप जितेका थिए । आइपिएलको एकै संस्करणमा सबैभन्दा बढि रन बनाउने कीर्तिमान रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोरका कप्तान विराट कोहलीको नाममा छ ।
कोहलीले सन् २०१६ को आइपिएलमा १६ खेलमा ९ सय ७३ रन बनाएका थिए । कोहलीले उक्त संस्करणमा ४ शतक र ७ अर्ध शतक प्रहार गरेका थिए । यस सिजनको आइपिएल खेल्न विश्वका सबै चर्चित ब्याट्सम्यान तयार र आतुर छन् । सबै टोलीमा रहेका ब्याट्सम्यान, ती खेलाडीको पछिल्लो समयको लय, क्षमता लगायत सबै कुरा हेर्दा यस सिजनमा यी पाँच ब्याट्सम्यानले सर्वाधिक रन बनाउन सक्छन् ।
५. शिखर धवन (दिल्ली क्यापिटल्स)
सीमित ओभरको क्रिकेटमा भारतीय टोलीका पहिलो रोजाईका ओपनर शिखर धवनले आइपिएल दिल्ली क्यापिटल्सबाट खेल्ने छन् । निरन्तर उत्कृष्ट प्रर्दशन गर्दै आएका धवन यस सिजनमा सर्वाधिक रन बनाउने ब्याट्सम्यान बन्न सक्छन् । धवन दिल्लीका अनुभवी र प्रमुख ब्याट्सम्यान हुन् ।
गतवर्ष धवनले १६ खेलमा ५ सय २१ रन बनाएका थिए । धवन आइपिएल इतिहासका पनि एक सफल ब्याट्सम्यान हुन् । आइपिएलमा कुल १ सय ५९ खेल खेलेका धवनले ४ हजार ५ सय ७९ रन बनाउदै सर्वाधिक रन बनाउनेको खेलाडीको पाँचौ स्थानमा छन् । दिल्लीमा धवनले पहिलो रोजाईमा खेल्ने छन् । धवन र पृथ्वी शा ले दिल्लीको ओपनिङ गर्ने छन् ।
दिल्लीको पहिलो रोजाईमा खेल्ने हुँदा धवन यस सिजनमा सर्वाधिक रन बनाउन बनाउन सक्छन् । दिल्लीलाई पहिलो पटक उपाधि दिलाउने सोचमा रहेका धवनलाई अर्को वर्ष घरेलु मैदानमा हुने टि२० विश्वकपमा भारतीय टोलीमा स्थान बलियो बनाउन उच्च प्रर्दशन गर्नुपर्ने दबाब पनि छ । जसको कारण धवनले यस सिजनमा उत्कृष्ट प्रर्दशन गर्न सक्छन् ।
४. श्रेयस ऐर (दिल्ली क्यापिटल्स)
दिल्ली क्यापिटल्सका कप्तान श्रेयस ऐर पछिल्लो समय राम्रो लयमा छन् । भारतीय सीमित ओभरको क्रिकेटमा चौथो नम्बरको दीर्घकालिन समस्याको समधानको रुपमा हेरिएका युवा ब्याट्सम्यान ऐरले पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा उच्च प्रर्दशन गर्दै आएका छन् ।
२५ वर्षीय युवा ब्याट्सम्यान ऐरले गत फेब्रुअरीमा न्युजिल्यान्डविरुद्ध ओडिआई र टि२० आई सिरिज दुबैमा उच्च प्रर्दशन गरेका थिए । उनले पहिलो ओडिआईमा १ सय ३ रनको शतकीय इनिङ खेल्दा दोस्रोमा ५२ र तेस्रो खेलमा ६२ रन जोडेका थिए । टि२० आई सिरिजमा पनि उच्च प्रर्दशन गरेका थिए ।
गतवर्ष ऐरले आइपिएलमा १६ खेलमा ४ सय ६३ रन बनाएका थिए । ऐर टोलीको कप्तान हुँदा अझ जिम्मेवारीका साथ ब्याटिङ गर्ने छन् । ऐरले आफ्नो लयलाई निरन्तरता दिदै दिल्लीको पहिलो पटक उपाधि जित्ने सपना साकार पार्न चाहान्छन् ।
३. लोकेश राहुल (किंग्स इलेभेन पञ्जाव)
किंग्स इलेभेन पञ्जावका कप्तान तथा ओपनर लोकेश राहुल उत्कृष्ट लयमा छन् । राहुलले भारतीय टोलीमा पछिल्लो समय ओपनिङ र पाँचौ नम्बर दुबैमा उत्कृष्ट प्रर्दशन गर्दै आएका छन् । गत जनवरी फेब्रुअरीमा भारतले राहुललाई विकेटकिपरको रुपमा पाँचौ नम्बरमा मौका दिएको थियो ।
राहुलले न्युजिल्यान्डविरुद्ध तेस्रो ओडिआईमा १ सय १२ रनको उत्कृष्ट शतकीय इनिङ खेल्दै आफू तल्लोक्रममा पनि खेल्न सक्ने क्षमता भएको ब्याट्सम्यानको रुपमा प्रमाणित गरेर देखाएका थिए । पहिलो ओडिआईमा न्युजिल्यान्डविरुद्ध ८८ रनमा अविजित रहेका थिए । टि२० आई सिरिजमा पनि राहुलको प्रर्दशन उत्कृष्ट थियो । राहुल पहिलो टि२० खेलमा ५६ र दोस्रोमा ५७ रन जोडेका थिए । पछिल्लो दुई वर्षयता राहुलको लय उत्कृष्ट छ । राहुल जुनसुकै भूमिकामा पनि प्रर्दशन गर्न सक्ने ब्याट्सम्यान हुन् ।
राहुलले ४२ टि२० आई खेलमा २ शतक सहित कुल १४ सय ६१ रन बनाएका छन् । गतवर्ष आइपिएलमा राहुलले १४ खेलमा १ शतक र ६ अर्ध शतक सहित कुल ५ सय ९३ रन सहित दोस्रो स्थानमा थिए । केहि अपवादलाई छोड्ने हो भने राहुलले पाएका सबै अवसरमा उत्कृष्ट प्रर्दशन गरेका छन् । कप्तानको जिम्मेवारीमा राहुलले अझ उत्कृष्ट प्रर्दशन गर्न सक्छन् । आक्रामक ब्याटिङको क्षमता राख्ने राहुलको लयलाई रोक्न यस सिजनमा बलरलाई कठिन पर्न सक्छ । क्रिस गेलसँगै ओपनिङ गर्ने राहुल आइपिएलमा सर्वाधिक रन बनाउने ब्याट्सम्यान बन्नुको साथै पञ्जावलाई पहिलो पटक उपाधि दिलाउन सक्छन् ।
२. विराट कोहली (रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोर)
भारतीय क्रिकेट टोलीका कप्तान विराट कोहलीलाई रन मेसिन पनि भन्ने गरिन्छ । कोहलीले भारतीय टोली र बेंगलोर दुबैबाट उत्कृष्ट प्रर्दशन गर्दै आएका छन् । कोहली आइपिएलमा एकै संस्करण र इतिहास दुबैमा सर्वाधिक रन बनाउने ब्याट्सम्यान हुन् । उनले सन् २०१६ मा ९ सय ७३ रन बनाएका थिए ।
आइपिएल इतिहासका सर्वाधिक सफल ब्याट्सम्यान कोहलीले १ सय ७७ खेलमा ५ शतक र ३६ अर्ध शतक सहित ५ हजार ४ सय १२ रनका साथ शीर्ष स्थानमा छन् । कोहली ब्यक्तिगत रुपमा सफल भएपनि बेंगलोरलाई उपाधि दिलाउन भने सकेका छैनन् । उपाधिको भोकमा रहेका कोहली यस सिजनमा अझ उत्कृष्ट प्रर्दशन गर्दै च्याम्पियन बन्न चाहान्छन् । च्याम्पियन बन्न कोहलीले हर प्रयास गर्ने छन् ।
कोहलीको अर्को विशेषता अन्तिम समय सम्म हार नमान्ने खेलाडी हुन् । क्रिजमा टिकेर बलरको डटेर सामना गर्ने गर्दछन् । जव कोहली लयमा आउछन् भने उनलाई रोक्न जो कोही बलरलाई कठिन पर्ने गर्दछ । निरन्तर उत्कृष्ट प्रर्दशन गर्दै आएका कोहली यस सिजनमा सर्वाधिक रन बनाउने ब्याट्सम्यान बन्न सक्छन् ।
१. डेविड वार्नर (सनराइजर्स हैदराबाद)
अष्ट्रेलियाका आक्रामक ओपनर तथा सनराइजर्स हैदराबादका कप्तान डेभिड वार्नरले आइपिएलमा निरन्तर उच्च प्रर्दशन गर्दै आएका थिए । गतवर्ष वार्नरले मात्र १२ खेलमा १ शतक र ८ अर्ध शतक सहित ६ सय ९२ रनका साथ सर्वाधिक रन बनाउने ब्याट्सम्यान बनेका थिए ।
सन् २०१५ को संस्करणमा पनि वार्नरले पहिलो पटक ओरेन्ज क्याप जितेका थिए । उक्त संस्करणमा वार्नरले १४ खेलमा ५ सय ६२ रन जोडेका थिए । सन् २०१७ मा वार्नरले १४ खेलमा ६ सय ४१ रनका साथ ओरेन्ज क्याप जितेका थिए । सन् २०१६ को आइपिएलमा वार्नर १७ खेलमा ८ सय ८४ रन जोड्दै दोस्रो स्थानमा थिए ।
वार्नर आक्रामक ब्याटिङका लागि परिचित छन् । सन् २०१८ मा बल टेम्परिङ आरोपको कारण प्रतिबन्धमा परेपछि अन्तर्राष्ट्रिय मैदानमा एक वर्षपछि फर्केका वार्नरको प्रर्दशन झन उत्कृष्ट थियो । वार्नरले आफ्नो लय समाउछन् भने उनलाई रोक्न निकै कठिन पर्दछ । अष्ट्रेलिया र हैदराबाद दुबैबाट उत्कृष्ट प्रर्दशन गर्दै आएका वार्नर यस सिजनका पनि ओरेन्ज क्यापका बलिया दाबेदार ब्याट्सम्यान हुन्